शेयर बजारमा कोरोनाको प्रभाव - Online Majdoor
९ चैत्र २०७६, आईतवार १४:२७
काठमाडौँ, ८ चैत (रासस) । कोरोना भाइरसको त्रासले शेयर बजारसमेत प्रभावित भएको छ । सोही कारण नेप्सेमा चरम उतारचढावसमेत देखापरेका छन् । यस साता लगानीकर्तामा पनि एक प्रकारको नकारात्मक अवस्था देखाप¥यो ।
नेपाल स्टक एक्सचेन्जका अनुसार साताभर कुल १७४ कम्पनीका कुल दुई करोड २७ लाख १९ हजार १२२ कित्ता शेयर रू. आठ करोड २६ लाख ९५ लाख दुई हजार ७११ बराबरको कारोबार भयो ।
साताको पहिलो दिन नेप्से परिसूचकमा भारी गिरावट देखाप¥यो । शेयर कारोबारमा सहजता ल्याउन भन्दै नेपाल धितोपत्र बोर्डको निर्देशनमा नेपाल स्टक एक्सचेन्जले कारोबार समय थप गरेर ४ बजेसम्म पु¥याएको भए पनि बजारमा उत्साह देखिन सकेन । त्यस दिन नेप्से परिसूचक ६४.१४ अङ्कले घटेर एक हजार ३१३.०४ मा पुग्यो । कुल १७४ कम्पनीका ५५ लाख ७० हजार ३० कित्ता शेयर रू. दुई अर्ब १० करोड १४ लाख १७ हजार २९२ मा खरिद–बिक्री भए ।
सोमबार नेप्से परिसूचक झिनो अङ्कले वृद्धि भयो । त्यस दिन नेप्से ३.३५ ले वृद्धि भई एक हजार ३१६.३९ मा पुग्यो । कुल १६० कम्पनीको ४१ लाख ९१ हजार ४१५ कित्ता शेयर रू. एक अर्ब ६१ करोड ५३ लाख ४१ हजार ८७७ मूल्यमा खरिद–बिक्री भए ।
मङ्गलबार नेप्से परिसूचक भारी अङ्कले ओरालो लाग्यो । त्यस दिन नेप्से परिसूचक ४४.३३ अङ्कले घटेर एक हजार २७२.०६ मा पुग्यो । घटेको बजारमा कारोबार रकम भने झण्डै डेढ अर्ब बराबर भएको छ । कुल १७५ कम्पनीको ४३ लाख ६७ हजार ७७५ कित्ता शेयर रू. एक अर्ब ४६ करोड ५१ लाख ८४ हजार ६५६ मूल्यमा खरिद बिक्री भए ।
बुधबार पनि नेप्से परिसूचक ओरालो लाग्नेक्रम रोकिएन । त्यसदिन नेप्सेमा १६.२६ अङ्कले गिरावट भयो । बुधबार कुल १७२ कम्पनीको ३४ लाख ८३ हजार २२१ कित्ता शेयर रू. एक अर्ब १८ करोड ४४ लाख १६ हजार ८७८ मा खरिद–बिक्री भए ।
साताको अन्तिम दिन बिहीबार नेप्सेमा सामान्य सुधार देखाप¥यो । त्यस दिन नेप्सेमा १३.५० ले वृद्धि भई एक हजार २६९.३० मा पुग्यो । नेप्सेको उकालो यात्रासँगै कारोबार रकमसमेत बढेर झण्डै रू. दुई अर्बको हाराहारीमा पुग्यो । कूल १७३ कम्पनीको ५१ लाख ६ हजार ६८१ कित्ता शेयर रू. एक अर्ब ९० करोड ३१ लाख ४२ हजार आठ बराबरको कारोबार भयो ।
जुम्लाको खेतीपातीबारे एक चर्चा
अर्थमन्त्रीको भान्छे बोली !
विपद्‍मा सहकारीको वित्तीय सेवा व्यवस्थापन र यसका चुनौती
महामारीपछि वित्तीय सहकारीका सम्भावित चुनौती र अवसरहरू
कुखुरा व्यवसायमा कोरोनाको कहर ः दैनिक २२ करोड नोक्सान